विलियम हॉवर्ड टिफ्ट जीवनी: संयुक्त राज्य अमेरिका को 27 औं राष्ट्रपति
विलियम हॉवर्ड टिफ्ट (सेप्टेम्बर 15, 1857 - मार्च 8, 1930)49, 199 र मार्च49 194 को बीच अमेरिकाको 27 औं राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरिरहेको थियो। उनको समय कार्यालयले डलरको डिप्लोमेसीको प्रयोगको लागि ज्ञात भएको थियो। । पछि पनि पछि अमेरिकी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्टमा सेवा गर्ने एकमात्र राष्ट्रपतिको भेद छ।
विलियम हॉवर्ड टिफ्टको बचपन र शिक्षा
टिफ्ट सेप्टेम्बरमा जन्मिएको थियो।
15, 1857, सिनसिनाटी, ओहियो। तिनको बुबा एक वकील थिए र टिफ्टको जन्म हुँदा सिनसिनाटीमा रिपब्लिकन पार्टी भेटियो। Taft सिनसिनाटी मा एक सार्वजनिक विद्यालय मा भाग लिया। त्यसपछि उहाँ 1874 मा येल विश्वविद्यालयमा भाग लिन वुडवर्ड हाई स्कूल जानुभयो। उनले आफ्नो कक्षामा दोस्रो स्नातक गरे। उनले सिन्सिन्नति लॉ स्कूल (1878-80) विश्वविद्यालयमा भाग लिइन्। उनले 1880 मा पट्टीमा भर्ना गरे।
Taft Alphonso Taft र Louisa मारिया Torrey को जन्म भएको थियो। उनको पिता एक वकील र सार्वजनिक आधिकारिक थिए जसले राष्ट्रपति उलिसस एस। ग्रांट को युद्ध को सचिव को रूप मा सेवा गरे। Taft दुई आधा भाइहरू, दुई भाइहरू र एक बहिनी थिए।
191918 मा, ताइफ्टले हेलेन "नेल्ली" हेरेरलाई विवाह गरे। त्यो सिनसिनाटी मा एक महत्वपूर्ण जज को छोरी थियो। एकसाथ तिनीहरू दुई छोराहरू, रबर्ट अल्फोसो र चार्ल्स फेल्स र एक छोरी, हेलेन हेर्रोन टाफ्ट मनिङ थिए।
विलियम हॉवर्ड Taft को राष्ट्रपति से पहिले क्यारियर
Taft स्नातक स्तर मा हैमिल्टन काउन्टी ओहियो मा सहायक अभियुक्त बनी।
उनले 1882 सम्मको क्षमतामा सेवा गरे र त्यसपछि सिनसिनाटीमा कानून अभ्यास गरे। उनी 1887 मा अमेरिकाको वकील जनरल 1887 मा न्यायाधीश बनिन्, र 1897 मा छैटौं यू.एस. सर्किट कोर्टको न्यायाधीश बने। उनले 1899-1900 बाट कानून सिके। उहाँ आयुक्त हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि फिलिपिन्सका गवर्नर (1900-190 9)। त्यसपछि उनी राष्ट्रपतिको थिएडोर रोरोवेल्ट (1988-08) अन्तर्गत युद्धको सचिव थिए।
1908 मा, Taft राष्ट्रपतिको लागि दौडने को लागि Roosevelt द्वारा समर्थित थियो। उहाँ जेम्स शेरमेनसँगको रिपब्लिकन नामांकन हुनुभयो। उनी विलियम जेनिङ ब्रायनले विरोध गरे। अभियान नैतिकताबारे विषयहरू भन्दा बढी थियो। टिफ्टले 52 प्रतिशत लोकप्रिय मतदान गरे।
विलियम हावर्ड टिफ्टको प्रेसीडेंसीको घटनाक्रम र समापन
सन् 1 999मा पेन-एल्ड्रिच टेरिफ अधिनियम पारित भयो। यसले टर्मिफ दरहरू 46 देखि 41% सम्म परिवर्तन गर्यो। यसले डेमोक्रेट र प्रगतिशील रिपब्लिकन दुवैलाई निराश पार्छ जसले यो महसुस गर्यो कि यो एक टोकन परिवर्तन थियो।
Taft को प्रमुख नीतिहरु मध्ये एक डलर डिप्लोपमेसीको रूपमा चिनिन्छ। यो विचार थियो कि अमेरिकाले विदेशमा अमेरिकी व्यापारको हितलाई बढावा दिन मद्दतको लागि सेना र कूटनीतिकता प्रयोग गर्नेछ। उदाहरणका लागि, 1912 मा ताइफेटले सरकार विरुद्ध विद्रोह रोक्नको लागि निकारागुआमा मरिन्स पठाउन पठायो किनभने यो अमेरिकी व्यापारिक हितको लागि मित्रवत थियो।
रोसवेल्टको कार्यालयमा पछ्याउँदै, ताइटले ग्यारेन्टी कानुन लागू गरे। उनले 1911 मा मानक ओयल कम्पनी ल्याउन चाहेको थियो। टिफ्टको अवधिको समयमा पनि, छैटौं संशोधन पारित भएको थियो कि अमेरिकाले आयकरहरू इकट्ठा गर्न अनुमति दिएको थियो।
टाउफ्टले पुन: चयनको लागि पराजित गर्यो जब रुलवेल्टले पछाडी राखे र डेमोक्रेट वुड विल्सनलाई जित्न अनुमति दिए बुल मोस पार्टीको एक प्रतिद्वंद्वी पार्टी गठन गरे।
उहाँ येल (1913-21) मा कानुन प्रोफेसर बन्नुभयो। 1921 मा, Taft ले आफ्नो लामो वांछित इच्छा अमेरिकाको उच्च न्यायालयको मुख्य न्यायाधीश भए जहाँ उनको मृत्यु हुनुअघि एक महिना सम्म सेवा भयो। 8 मार्च 1930 मा उनी घर फर्किए।
रूफ्ट रोल्लेल्टको कदर गर्ने कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण थियो। यसबाहेक, तिनको डलरको डिप्लोमेमेण्टले यस कार्यलाई बढायो कि अमेरिकाले आफ्नो व्यवसायिक चासोहरूको रक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ। आफ्नो समयको कार्यालयको दौडान, अन्तिम दुई असामान्य अवस्थाहरू युनियनमा थपिएका थिए जसलाई कुल 48 राज्यहरूमा ल्याइएको थियो।
जेम्स गारफील्ड - संयुक्त राज्य अमेरिका को ट्वेंटिटी राष्ट्रपति
कार्यालयमा सेवा गर्ने कुन राष्ट्रपतिहरूले डराए?
जेम्स K. पोल्कबाट उद्धरणहरू
केवल राष्ट्रपति मात्र Veto बिल गर्न सक्छन्
के राष्ट्रपति उम्मेद्वारहरूले आफ्नो कर रिटर्न जारी गर्न आवश्यक छ?
एन्ड्रयू जैक्सन को पनीर बिग ब्लक
वारेन जी। हार्डिंग - संयुक्त राज्य को 29 औं राष्ट्रपति
एन्ड्रयू जैक्सन: महत्त्वपूर्ण तथ्य र संक्षिप्त जीवनी
संयुक्त राज्यको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रपति को थिए?
बज Aldrin भेट्नुहोस्
के एक गोल्डफिश टर्न व्हाइट यदि डार्कमा बायाँ छ?
'स्नारल शब्दहरू' र 'पोर शब्द' के हुन्?
कोरियाको Koryo वा Goryeo राज्य
HOFFMANN उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
प्यासिफिक युनिवर्सिटी जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
मकरिया र मीनस प्यार संगतता
टममी केटा बाट सम्झनायोग्य उद्धरण
सबै देश स्टार एरिक चर्च बारे
कुन गोल्फले तपाइँलाई तपाइँको गोल्फ थैलीमा लगाउनुपर्छ?
साहित्यमा के सुचना छ?
5 पारंपरिक Usui रेकी प्रतीक र उनको अर्थ
विश्वविद्यालय डेनवर (डीयू) प्रवेश
नरपा विश्वविद्यालय प्रवेश
संस्थागत नैतिकता को परिभाषा
क्रिसमसका बाह्र दिनको सत्य अर्थ
1960 को फसिनवाद टाइम्स
स्थानान्तरण गरियो? अब के?
ग्याप इंश्योरेंस: यो के हो र तपाईंलाई यो चाहिन्छ?
चित्रकारीमा मास्किंग टेप कसरी प्रयोग गर्ने
क्लासिक मोटरसाइकल चलाउने पहिलो समय सवार
स्नोबोर्ड फोक कसरी घुमाउनुहुन्छ (स्विच)